खिमलाल भट्टराई: पार्टी र देशप्रति समर्पित नेता | छलफल
खिमलाल भट्टराई: पार्टी र देशप्रति समर्पित नेता
परिवारका साथ नेकपाका प्रभावशाली नेता माननीय खिमलाल भट्टराई
माननीयज्यू, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
सदन चलिरहेको छ, त्यहाँ कानुन बनाउने काममा जुटिरहेको छु ।
काममा सहजता असहजता के छ ?
असहजता छैन तर कतिपय सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रियामा गएर विवादहरू टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्षले कत्तिको असजिलो बनाउँछ ?
यो भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रतिपक्षले कुरा बुझेन वा नबुझेको नक्कल गरेर हो यसमा अलि असजिलो र विवाद गरिरहेको छ ।
किन विवाद गरिरहेको छ ?
सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने गरी, विभिन्न संघ संस्थाका, उद्योगी
व्यवसायीहरूका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऐन कानुन ल्याएको छ । त्यसमा प्रतिपक्षले
सुकुम्वासीलाई त्यसरी भूमिहीनहरूलाई भूमि दिने गरी, उद्योगी,व्यवसायीको हित हुने गरी
कानुन ल्याउनु हुँदैन, जग्गा बाँड्नुहुँदैन भनेर उहाँहरूले सुकुम्वासी,व्यवसायीविरोधी आग्रहपूर्ण
दृष्टिकोण राखेर विवाद गरिरहनु भएको छ ।
तपाईंहरूको बहुमत छ, जस्तो निर्णय गर्न पनि सहजै छ त ?
हामी प्रतिपक्षीलाई पेलेर जाने पक्षमा छैनांै । देश र जनताको हित हुने कुरामा मिलेरै जाऔ,
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जाऔ, सबैको सहमतिमै गरौं भन्ने चाहन्छौं तर उहाँहरूचाहिँ त्यसरी
जान चाहनु भएको छैन ।
तपाईंको जन्म मिति र ठेगाना बताइदिनुस् न ।
म २०२७ साल वैशाख १५ गते गुल्मी जिल्लाको दिगाम भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ । मेरो बाल्यकाल त्यहीँ बित्यो । २०३७ सालमा बुटवल झर्याैं ।
के कारणले झर्नुभयो ?
बुवा पहिल्यैदेखि तराईमै हुनुहुन्थ्यो, घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो, ऋण लाग्यो,त्यो
तिर्न र घर व्यवहार मिलाउन जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएछ । त्यही कारणले जग्गा बेचेर तराई झर्नुभयो ।
त्यहाँ झरेपछि कत्तिको सहज भयो ?
भएन, माथि घर जग्गा नबेची घरमा आगलागी भयो, अन्नपात जल्यो, भैंसी मर्याे, त्यसले गर्दा त्यहाँ व्यवहार मिलाएर रहेको पैसाले तराईमा अलिकति जग्गा लीने बुवाको योजनामा ठेस लाग्यो ।
कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो त तराईमा ?
योजनाअनुसार त भएन तर बुवाले जसोतसो व्यवस्थापन गर्नुभयो ।
तराईमा आय स्रोत के थियो ?
सानो चिया पसल थियो, त्यसैबाट र खेती गरेर घर चल्थ्यो ।
बुवा बितिसक्नु भयो, हाल आमा,दाजु, भाउजू, उहाँका छोराछोरी, एक बहिनी, मेरी श्रीमती र एक छोरा छौं ।
अर्कालाई दुःख नदिने, सबैको भलो चाहने, इमान्दार, मेहेनती हुनुहन्थ्यो ।
बुवाआमाको के कुराबाट तपाईं बढी प्रभावित हुनुहुन्छ ?
आफूले दुःख गरेर भए पनि छोराछोरी पढाउनु पर्छ भन्ने असल भावनाबाट ।
सबैको भलो चाहने, कसैले अन्याय गरेको मन नपर्ने, कसैको हानि नोक्सानी नगर्ने, सबैसँग मिल्ने चञ्चले स्वभावको थिएँ रे ।
खेतीपाती गर्दै,घाँस काट्दै, भैंसी चराउँदै, पढ्दै रमाइलो ढंगले बित्यो ।
तपाईंको कुनै अविस्मरणीय सन्दर्भ छ ?
एसएलसी दिइसकेपछि सीएमए पढ्नका लागि सुर्खेत क्याम्पसमा फोन गर्न दूर सञ्चार कार्यालय
गएर यसरी फोन गर्छु भनेर योजना बनाएको थिएँ, त्यहाँ गएर फोन गर्दा त आत्तिएर फोन नै उल्टो समाएछु पछि अरूले सुल्टो पारिदिए, पहिले बनाएको योजना सबै बिर्सिएँ, अर्को माओको नामै नसुनेको मैले माओको जन्मोत्सवका भाषण गरेको थिएँ के गरेँ होला भनेर र सानोमा अभावमा जुत्ता लगाउन पाउँदाको, फेरि अर्को वर्ष पाइन्ट लगाउन पाउँदा झन् खुसी भएको याद अविस्मरणीय छ ।
खान खेल्नमा त्यस्तो रूचि थिएन, एकथोक दाल, तरकारी जे भए पनि हुने, अनुशासन र वक्तृत्व कलामा भने पुरस्कार नै पाएको छु ।
सुरुवाती शिक्षा कहाँ लीनु भयो ?
अक्षर चिन्ने काम गुल्मीको दिगाम प्राविमा टीकाराम सरबाट भयो । दुईदेखि बुटबलको दिहर्वा
माविमा पढेँ ।
१ देखि ५ कक्षासम्म त्यति राम्रो भएन त्यसपछि दोस्रो, तेस्रा,चौथो हुन्थेँ ।
पढ्दा आर्थिक अभाव कतिको भयो ?
निम्न वर्गीय किसान परिवार भएकोले बुवालाई आर्थिक समस्या थियो तर बुवाले पढ्नमा कुनै
समस्या आउन दिनुभएन । फेरि म जेहेन्दार विद्यार्थी भएकोले छात्रवृत्तिमा पढेँ ।
सानोमा कुट्ने कुटाइ खाने काम कत्तिको भयो ?
सानोमा त्यस्तो भएन राजनीति गर्दा प्रहरीको यातना भोगेको छु ।
राजनीति गर्दा जेल पनि पर्नुभयो ?
२०४५ सालमा हिरासत र जेलमा गरी ५ महिना बसेको छु ।
पञ्चायती सामन्ती व्यवस्था, अभावै अभावको अवस्था, ठूलाको अगाडि सानाको आवाजै नसुनिने, न्याय मर्ने समस्या, छुवाछूत र विभेद थियो ।
राजनीतिप्रतिको रूचिले जागिरतिरको ध्यानै भएन, पढ्दा अभाव टार्न ट्युसन पढाएको छु ।
८ कक्षामा पढ्दा २०४३ सालमा अनेरास्ववियु प्राकको अध्यक्ष थिएँ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले शोषित, पीडित जनतामाथि थिचोमिचो गर्ने सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्छु
भनेर अनेरास्ववियुमा लागेँ ।
विवाह कोसँग कहिले र कसरी गर्नुभयो ?
२०५४ सालमा सुशीला भुषालसँग प्रेम विवाह भयो ।
खर्च कति गर्नुभयो ?
तत्कालीन खेलकुदमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा दक्षिणकाली मन्दिरमा भाषण गरेर
सामान्य खर्चसहितको विवाह भयो ।
मैले समझदार, सहयोगी, इमान्दार, सुन्दरता र शिल स्वभाव भएकी, पढे लेखेकी, आफूलाई बुझ्ने, केही गरौं भन्ने खोजेको थिएँ, त्यस्तै पाएँ ।
घरमा समय बढी दिए हुन्थ्यो, परिवारको हेर विचार बढी गरिदिए हुन्थ्यो, सामाजिक प्रतिष्ठा
बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्छिन् ।
एक अर्काका समस्या पीरमर्का दुवैले बुझ्ने हुनाले त्यस्तो केही पर्दैन ।
उहाँलाई विवाह गर्नुअघि कुनै केटीसँग लभ चक्कर चलेन ?
म जोसँग सम्बन्ध गाँसिन्छ, जीवनभरका लागि सोचेर गाँस्नुपर्छ, बीचमा कसैले कसैलाई धोका
दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताको थिएँ, त्यस्तो भएन ।
विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम सबै हिसाबले जननेता स्व.मदनकुमार भण्डारी ।
बढी मन परेर पढेको पुस्तक कुन कुन हुन् ?
लेनिनको राज्य र क्रान्ति तीनपटक पढेको छु, एकपटक पढेकोमा अग्निदीक्षा, युवाहरूको गीत,
तरुणगाड र आमा उपन्यास ।
चाँडै अरूलाई विश्वास गरिहाल्ने बानी ।
सूचनाको लागि फेसबुक उपयोग गर्छु तर यसमा धेरै विकृति छ ।
आमाबुवा, सुरुमा राजनीति सिकाउने गुरु विजय पौडेल र सिक्दै भोग्दै आएका परिघटना
प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
बुबा, मदन–आश्रीतको निधन हुँदा र २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा दुःखको क्षण, गणतन्त्र आउँदा र नयाँ संविधान घोषणा हुँदा खुसीको क्षण ।
जनहितको लागि लागेको मान्छे, काम गर्ने अवसर पाएको छु, काम गरेको छु, सन्तुष्टि नै छ, असन्तुष्टि छैन ।
गुल्मीको दिगाममा जन्मनुभएका नेकपाका प्रभावशाली नेता खिमलाल भट्टराई जिल्लाको राजनीतिहुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमै योगदान दिएका नेतामा पर्नुहुन्छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि विद्यार्थीकालदेखि नै अनेरास्ववियुको राजनीतिमार्फत कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा लाग्नुभएका उहाँले पञ्चायती सामन्तका विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्दा ५ महिना जेलसमेत बस्नुभएको छ । विद्यार्थी राजनीतिको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि जिल्ला पार्टीको विभिन्न तहहुँदै केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक भएर महत्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएको छ । त्यतिमात्र होइन, उहाँले पार्टीको संगठन विस्तारदेखि नीति निर्माण तहमा रहेर सफल र सार्थक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । जनताको हित,पार्टीको सिद्धान्त र स्वअनुशासनलाई उच्च स्तरमा राखेर परिर्वतन र समृद्धिका लागि काम गरिरहनु भएका उहाँ बौद्धिक, शालीन एवं आम जनता र पार्टी पंतिmमा परिचित युवा नेता हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिमार्फत अगाडि बढ्नुभएका भट्टराईको साढे ३ दशकको गतिशील राजनीतिक जीवनयात्रा अहिले कानुन निर्माताको रूपमा जनताका काम गर्दै अगाडि वढिरहेको छ । जस्तोसुकै चुनौतीको डटेर सामना गर्ने, सत्यको पक्षमा सतिसालझैँ उभिने, पार्टीका निर्णय र स्थापित मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउन लाग्ने उहाँ विपक्षीलाई शालीनतापूर्वक तर तर्कपूर्ण कडा प्रहार गर्नुहुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश र जनताको स्वार्थलाई बढी महत्व दिने उहाँ विचार र सिद्धान्तमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने क्रियाशील नेता हुनुहुन्छ । मुलुकमा शान्ति, विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि खटिरहनु भएका उनै जनसेवक भट्टराईको जीवन संघर्ष अनुभव, अनुभूति, रूचि र स्वभावका विविध पाटोलाई समेटेर जीवञ्चक्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
गुल्मीमा जन्मिएर रूपन्देही र काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउनु भएका राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई गाउँले सस्कारी परिवारका राष्ट्रिय नेता हुनुहुन्छ । उहाँका पिताको निधन भइसकेको छ भने आमा घरमा हुनुहुन्छ । उहाँको परिवार मूलतः कृषि पेसामा आवद्घ छ । निम्न मध्यवर्गीय किसान परिवारमा २०२७ सालमा जन्मेर ४९ वर्षे जीवनयात्रामा हिँडिरहनु भएका भट्टराईको पारिवारिक पृष्ठभूमि आनन्दित, सुखी र अनुशासित छ । उहाँका आमा र दाजु घर व्यवहारमा हुनुहुन्छ भने बहिनीको विवाह भएर घरजम भइसकेको छ । पढालेखा उच्च संस्कारकी अग्रेजी विषयमा अब्बल सुशीला भुषालसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएका भट्टराईकी जीवन संगिनीले एमए उत्तीर्ण गरी विभिन्न संघ संस्था र सरकारी कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भने छोरा स्कुलमा पढिरहनु भएको छ । उहाँको परिवारले अप्ठ्यारोमा परेका जिल्लावासीलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सहयोग पु¥याएको छ, । उहाँले सांसदको रूपमा जिल्लाको विकास निर्माण र मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेर सुखी नेपाली बनाउन योगदान दिनुभएको छ । उहाँको परिवारले कृषि, समाजसेवा र राजनीति तीनै क्षेत्रबाट योगदान गरेको छ । खराब विचार र असन्तुष्टि कसैमा छैन । यो कोणबाट हेर्दा उहाँको परिवार सुन्दर, शान्त र विशाल देखिन्छ, जुन अनुकरणीय पनि छ ।
सामूहिक स्वार्थमा बढी समय दिएर समाज परिवर्तनका लागि अनगिन्ती संघर्ष गर्नु भएका खिमलाल भट्टराईले ४९ वर्षे जीवनयात्राभित्र थुप्रै खालका तीता मीठा अनुभव,अनुभूति संगाल्नु भएको छ, आरोह अवरोह पार गर्नु भएको छ, बुवा बित्दाको पीडादेखि आर्थिक कठिनाईका अनगिन्ती असजिला मोडहरू पार गर्नुभएको छ, अन्य थुप्रै दुःख सुखका भँगालाहरू छिचोल्नु भएको छ, अप्ठ्यारो बेलामा भूमिगत रूपमा पार्टीमा काम गर्नुभएको छ, १० कक्षामा पढ्दा गाउँको माविमा अनेरास्ववियुको प्राक अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको छ, न्याय, समानता र विकासका लागि पञ्चायती शासकका विरुद्ध जेल बस्नुभएको छ, यातना खेप्नुभएको छ, सांसदको रूपमा बधाई र शुभकामनाका पुष्पगुच्छा समाएको सुखद सन्दर्भ छ, जननेता मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन र पार्टी फुट्दाको पीडा खेप्दै,प्रतिगमनको पीडा झेल्दै आँफै सक्रिय सहभागिता जनाई गणतन्त्र ल्याएको सुखद क्षण पनि छ उहाँसँग । बाल्यकालमा घाँस दाउरा काटेको, बाख्रा चराएको, कृषि कर्ममा सरिक भएको सन्दर्भ, साथीभाइसँग खेलेको अतितदेखि अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र सांसद भएर काम गरेको वर्तमान उहाँसँग छ । देश र जनताका लागि बोलेको, विकास निर्माणका काम गरेको अनुभव, अनुभूतिदेखि निरंकुशतासँग लडेको गौरवपूर्ण यात्रा अविस्मरणीय छ उहाँसँग ।
खिमलाल भट्टराईले अक्षर चिन्ने काम गुल्मीको दिगाम प्राविमा टीकाराम सरबाट गर्नुभएको रहेछ । दुई कक्षादेखि भने रूपन्देहीको माविबाट गर्नुभयो र त्यहीँबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो । उच्च शिक्षाअन्तर्गत आईएल र बीएल बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलबाट सम्पन्न गर्नुभएको थियो भने राजनीति शास्त्रमा एमए त्रिविबाट सम्पन्न गर्नुभएको थियो । केही समय ट्युसनसमेत पढाउनु भएका भट्टराईले राजनीतिकै कारण पढाइमा बिघ्न बाधा र समस्या झेल्नु भएको छ । तथापि, हरेक समस्या झेलर उहाँले उच्च शिक्षा पूरा गरी छाड्नुभयो र जस्तोसुकै समस्या आए पनि शिक्षा हासिल गर्न छाड्नुु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुभयो ।
बाल्यकालदेखि नै कसैसँग झगडा, अन्याय अत्याचार नगर्ने, सकेको सहयोग सबैलाई गर्ने र खराब मान्छेबाट टाढै रहने खिमलाल भट्टराई विद्यार्थी राजनीतिमार्फत गरिबको हित गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र यसले चलाएको परिवर्तन र जनताको मुक्ति आन्दोलनमा लाग्नु भएको हो । २०४३ सालमा १० कक्षा पढ्दै अनेरास्ववियुको प्राक अध्यक्ष हुनुभएका भट्टराईले विद्यार्थी संगठनका सबै पदीय जिम्मेवारी सम्हालेर केन्द्रीय अध्यक्ष हुनु भएको हो । २०६८ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट बिदा लिएर पार्टीको राजनीतिमा आउनुभएका उहाँले विद्यार्थी विशेषको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटी सदस्य, लुम्बिनी अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्यहुँदै नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिनु भएको थियो । पञ्चायती शासकका विरुद्ध भूमिगत रूपमा काम गर्दा प्रशासनका थुप्रै वारेण्टसहित ५ महिना जेलसमेत व्यहोर्नु भएका उहाँले राजनीतिक उतार चढावका थुप्रै परिघटनाहरू व्यहोर्नु भएको छ । जनताको र पार्टीको काममा कहिल्यै नथाक्ने भट्टराई विचार र निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने इमान्दार नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँले पार्टीको कामदेखि जिल्लाको विकास निर्माणको काममा महत्वपूर्ण योगदान दिएर नेकपाको जनप्रेमी युवा नेताको छवि बनाउनु भएको छ । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै समाजप्रति सचेत उहाँले सुख सयलको परवाह नगरी सबै जोखिम मोलेर निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा निरन्तर लाग्नुभयो, संगठन विस्तारका काम गर्नुभयो, सबैको मन जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहनु भयो, कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नुभयो यो उहाँको राजनीतिक समर्पण हो ।
समाज रूपान्तरण, विकास र समानताका लागि सामन्ती राजतन्त्र फाल्न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएका खिमलाल भट्टराईले २०४६ सालको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको सर्वसत्तावादविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सात विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अग्रमोर्चाको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, सामाजिक जागरणका कामहरू गर्नुभयो, राजतन्त्रविरोधी भावना जागृत गर्न प्रशिक्षण, जागरण अभियानमा सरिक हुनुभयो, जनतालाई जागरुक बनाउनु भयो विकास निर्माणका काम गर्ने त्यस्तो पदीय जिम्मेवारी यसभन्दाअगाडि पाउनु भएको थिएन । तथापि पहिलो अनुभव र अवसरका रूपमा उहाँ अहिले राष्ट्रियसभाको सांसद भएर कानुन बनाउने कामदेखि विकास निर्माणका काम गरिरहनुु भएको छ ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद खिमलाल भट्टराई नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले सुझुबुझ र योजनाका साथ काम गरिरहेकोले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । तर त्यसका लागि विकास र समृद्धिसँग राजनीतिलाई जोड्नुपर्ने अर्थात विकास र समृद्धिलाई राजनीतिको मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ । यसका अलावा पुरानो मक्किएको अनुचित सोच, व्यवहार, संस्कार,आचरण र स्वभावमा परिवर्तन गरेर विकासमैत्री नयाँ सोचको विकास, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सिस्टमले चल्ने पद्धति, विकासमैत्री कानुन, विकासमैत्री संरचना र योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,माग पनि हो तर यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने उहाँको चिन्ता छ । यसो हुन सके देश विकासमा अघि बढिहाल्ने बताउँदै भट्टराई भन्नुहुन्छ ‘अहिले बलियो स्थायी सरकार बनेकोले देशलाई कता लाने, विकासको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा मूल नेतृत्वले ठीक ढंगले निर्णय लिनु पर्ने र ऐन, कानुन र योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लाने, सिस्टमले गभर्न गर्ने बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ । जनताको भावना बुझेर काम गर्न नेता एकताबद्ध भएर अगाडि बढेमा नेपाल समृद्ध, नेपाली सुखी बन्न केही बेर नलाग्ने कुरामा कुनै शंका नभएको उहाँ बताउनु हुन्छ । यसमा सबैले आफूलाई करेक्सन गर्ने, एकताबद्ध भएर सबै अगाडि बढ्ने र नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने हो भने देश विकासमा अगाडि बढिहाल्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।
अधिकांश समय राजनीतिमा लगाउने खिमलाल भट्टराई मेहेनती , मिलनसार , स्वाभिमानी, अर्काको हितमा काम गर्न उत्साहित हुने, देश, जनता र पार्टीका लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार हुने क्रियाशील नेतामा पर्नुहुन्छ । हरेक कामलाई परिणाममा हेर्ने र युवालाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ भन्ने उहाँ राष्ट्रप्रतिको त्याग सबैमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँको परिवार पनि अप्ठ्यारोमा परेका जोसुकैलाई सहयोग गर्ने भएकोले उहाँ पनि अवस्था र सामथ्र्यअनुसार सहयोग गर्नुहुन्छ ,आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुहुन्छ, त्यहीअनुसारको असल आचरण र व्यवहार गर्नुहुन्छ । समाजलाई केही दिआंै,जनताका लागि केही गरौं भन्ने सकरात्मक सोच राख्नुहुन्छ । यही सोच,शैली र स्वभावले उहाँलाई जनप्रिय नेता बनाएको छ ।
खिमलाल भट्टराईका कतिपय समकालीन साथीहरू उच्च प्रशासक, सचिव डाक्टर, इञ्जिनियर र पाईलट छन्, कतिपय प्रहरी र सेनाका उच्च तहमा छन्, कोही विदेशमा छन्, सम्पति प्रशस्त कमाएका छन्, सुविधा सम्पन्न जीवन बिताएका छन्, उहाँ राजनीतिमा लागेर राष्ट्रियसभाको सांसदको रूपमा देश र जनताको हितका काम गरिरहनु भएको छ, आर्थिक रूपले उहाँलाई अझै समस्यै होलान् तर सामाजिक प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीका हिसाबले उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय छवि छ, दर्जनौ अमूल्य पदक र सम्मानहरू थाप्नुभएको छ । देशले चिन्ने नेता हुनुभएको छ, राष्ट्रियसभामा कानुन बनाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुका साथै पार्टीले सुम्पेका काम सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा सक्रियता र इमान्दारिताका साथ गरिरहनु भएको छ । देश र जनताको पक्षमा त्यहाँ हुने जस्तासुकै चुनौतीपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, यही कमले उहाँलाई यो उचाइ पनि दिएको छ, जीवन पनि सार्थक बनाएको छ ।
साथीको नजरमा खिमलाल
खिमलाल भट्टराई सबैसँग मिल्ने, कसैलाई दुःख नदिने, झुट नबोल्ने, जनताको हितमा खट्ने, अन्ययाका विरुद्ध लड्ने, परिर्वतन र विकासमा चाख दिने सिद्धान्तनिष्ठ एवं दृढ नेता भएको कुरा उहाँका राजनीतिक सहयात्रीहरू बताउनुहुन्छ ।
८ मै पढ्दा माविमा प्राक अध्यक्ष
राजनीतिले १६ वर्षमै जेल चलान
आन्दोलनका हरेक मोर्चामा अगाडि
श्रीमती अंग्रेजीमा तेज
जनता सुखी हुन, त्याग चाहिन्छ